မျှစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » မျှစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Posted by စိန္ၾကက္ဆင္ on Jul 28, 2013 in Think Different | 32 comments
အချိန်က မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၂နာရီ ၈မိနစ်ပါ ….. ဝါတွင်း သုံးလ သူရာမေယိယ ရှောင်လွှဲလို့လားမသိ ၅ရက်မြောက်နေ့မှာဘဲ သမာဓိကို စမ်းတဲ့အနေနဲ့ စဖျားပါတယ် အရပ်ကတို့ …. ဒါနဲ့ဘဲ ဆေးတတလုံးထိုးပီး တရေးနိူးချိန် ဝင်ဖတ်တော့ မျှစ်အကြောင်း နည်းနည်းလွဲနေမလားလို့ ထင်မိလို့ တင်ပြတဲ့ သဘောပါ ….
မိုးကာလ ရောက်ရင်ဖြင့် ဝါးရုံတို့အလယ် မျှစ်ဟုခေါ်သော ဝါးစို့တို့ အလျှံအပယ် ပေါ်ပေါက် တတ်ပါတယ်။ မြန်မာအခေါ် မျှစ်ပေါ့ … လူတို့နဲ့ အပြိုင် မျှစ်ဆိုသော အရာကို ဝက်တို့လဲ ကြိုက်ပါတယ်။ လူတို့ စားသုံးစရာ အနှီ ဝါးစို့တို့ကို ဝက်နဲ့ အပြိုင် တောထဲမှ ချိုင်ရပါတယ် ( အသေးစိတ် သိလိုသူများ တွတ်ပီ စာစဉ်တွင် ရှု ) အနှီဝါးစို့များ၏ မူလအရောင်မှာ စွတ်စွတ်မဖြူ ခပ်ကျင့်ကျင့် အရောင်ရှိပါတယ်။ အနီးကပ် သေချာစွာ ကြည့်ပါက ဝါးပင်တွင် ကပ်ညိနေတတ်သော အပ်၏ ထုထည်ပမာဏ ၃မီလီမီတာခန့် အရှည်ရှိ အမွှေးနှင့် အလားတူ ယားစေတတ်သော အရာများ တထွေးကြီးပါရှိပါတယ်။ သင်ဟာ တောထဲ တောင်ထဲ ရောက်နေပါက မျှစ်ဟုခေါ်သော အနှီဝါးပင်ပေါက် (ဝါ) ဝါးစို့များကို ချက်ချင်း ဆွတ်ယူပီး စား၍မရ ရေနွေးနှင့်ပြုတ် (ဝါ) ရေဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆေး၍ … ပြုတ်ဆေးပီး သကာလမှသာ ချက်ပြုတ်စားသောက်နိူင်ပါတယ်။
သီအိုရီအရ …. မျှစ် soft liner ကို ဒီအတိုင်း သုံးမရ အထက်ပါ နည်းစနစ်အတိုင်း သုံးမှသာ အဆင်ပြေပါမည်။ မယုံပါက သင် လျှာတင်မဟုတ် တကိုယ်လုံးယား + အဝင်/အထွက်ပါ ယားလိမ့်မည်။ ပုံ/ hard liner (မျှစ်ဒိုင်)
မပူပါနှင့် တောထဲမှ ချိုးယူ ဖြတ်ယူလာသော ဝါးစို့တို့ကို မျှစ်ဟု အခေါ်မရောက်သေးသော မခေါ်ဆိုအပ်သေးသော ဒိုင်အောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ပထဦးစွာ အချိန်ဖြင့်ဝယ်ယူပါသည်။ ထို့နောက် အပေါ်တွင် ရှိနေသော အကြောမာ(ဝါ) အထူသားများကို ဖယ်ရှားပါသည်။ ထိုသို့မဖယ်ခင်ကပင် ဝါးပိုးလား ( မျှစ်ချဉ်) ကြက်သောင်းလား၊ ဝါးယောင်းလား၊ ထီးတန်းလား၊ အင်းလား၊ စသဖြင့် များသောအားဖြင့် ဝါးပိုးကိုသာ မျှစ်ချဉ်လုပ်ရန် သပ်သပ်ခွဲ၍ ကျန်ဝါးစို့များကို သာမာန်မျှစ်လုပ်ရန် ရွေးချယ်ပါသည်။ မျှစ်ခူးသူမှသည် မျှစ်နောက်ဆုံး စားသုံးသူအထိ ရိုးရိုးတွက်ချက်ပါက အဆင့်၅ဆင့် ရှိပါသည်။
မျှစ်ချိုးသူ – မျှစ်ဒိုင်တစ် (ပြုတ်၊ ခွာ ၊ ခွဲ) – မျှစ်ဒိုင်၂ ( ဆိုး၊ ဖြန့် ) – မျှစ်ဒိုင်၃ (လက်ကားဖြန့်) – မျှစ်၄ ( အရောင်းသမား) – နောက်ဆုံးစားသုံးသူ consumer
မျှစ်တွင် အရောင်အတိအကျ သတ်မှတ်ရန် မရှိပါ။ ဝါးအမျိုးအစားအလိုက် အရောင်ကွဲပါသည်။ သို့ရာတွင် အသင် စာရှုသူတို့ စားသုံးနေသော ဝေဖန်နေသော မျှစ်ဟူသမျှသည် ဝါးပင်ရုံ၏ အောက်ခြေမှ နေ့မကူးမီ အချိန်အတွင်း ရေနွေးဖျောခြင်း တက်နင်းခြင်း ( ဥရောပရှိ Cider လုပ်ငန်းများ သကဲ့သို့ ) အရောင်အနည်းငယ်ဆိုးခြင်း၊ အရောင်ချွတ်ခြင်း၊ စသည့်ကိစ္စတို့ကို ပြုမူပီးဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် နောက်ဆုံး ဈေးထဲရောင်းချသည့် အဆင့်ထိ ဝါသော ( အဝါဆို ဝါးခယ်မက ပုစွန်ဥလေးနဲ့ကြော်) နီသော ( ချဉ်ပေါင်၊ ရုံးပတီနဲ့ ချဉ်ရည်ချက်ရင်ချက်၊ မချက်ရင် ပုစွန်ခြောက်ကလေးနဲ့ကြော် ခပ်ခြောက်ခြောက်လေး) ဖြူစွတ်သော ( ဝက်ရိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ငါးဒန်ခေါင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ) အနှီ မျှစ်ဝါ၊ မျှစ်နီ၊ မျှစ်ချဉ် တို့သည်ကား အသင် မပြုတ် ဆေးမဆိုးသော်ငြား အော်ရီဂျင်နယ်လီး ဒချိ ဒချိပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သလို မျှစ်နီသော ဝါသော ဖြူသော အလေ့အထတို့ကို ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းနှင့် ဆရာမကြီး ဒေါ်စောမုံညင်းတို့ကို မေးပါကလဲ သူရို့မသိနိူင်ကုန်၊ ကျနော့် မတော်လိုက်ရသော ယောက်ခမ ကျောက်ပန်းတောင်း-ပျဉ်းမနား တကြောအပိုင်စား ပျဉ်းမနား ဒေါ်ထွေး မျှစ်ချဉ်လုပ်ငန်းအား သမီးငမ်း၍ ဝင်လုံးရာမှ ဃဂနဏ သိခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။ မျှစ်ဝါဆိုကြော်၊ မျှစ်နီဆို ချဉ်ရည် ဆိုသည်မူကား အနော်ရထာမင်းလက်ထက်ကလား ဘယ်မင်းလက်ထက်ကျင့်သုံးသနည်း ကျနော်လည်း မသိပါ … သေချာတာကတော့ ကျနော့်အမေရဲ့ အမေလက်ထက်လောက်တွင် ရှိနေပေပြီဟု ထထစ်ချ ဆိုနိူင်ပေသည်။
မျှစ်ကလေး ဘာကြောင့် အစင်းစင်းထ
ဇာဂနာကြောင့်ထ ဟု ပြောလိုပါသည်။ ( ကိုသူရ မဟုတ် … စကားမစပ် အဲ့လူဂျီး ခုတလော ပျောက်နေတယ် ဘာသံမှ မကြား ) မျှစ်စို့ ဝါဝါများအား ဇာဂနာဖြင့် ခြစ်ပီးနောက် ဓါးဖြင့်ပြန်လှီးကာ အချောင်းချောင်း လေးများပြန်ရောင်းတတ်ပါသည်။ မျှစ်နီကိုမူ ဇဂနာဖြင့် ခြစ်ယုံသာ ခြစ်၍ အတုံးလိုက် ရောင်းတတ်ပါသည်။
မျှစ်နှင့် နိူင်ငံရေး ( ကလေး အတွေး )
အထက်တွင် မျှစ်အကြောင်း အကျဉ်းချုပ် သိသည့်အတိုင်း ဖော်ပြပီးခဲ့လေပီ …. ထို့ကြောင့် မျှစ်ကို မျှစ်လို့ဘဲ သဘောထားစေချင်ပါသည်။ မျှစ်ဝါကိုဘာ မျှစ်နီကိုဘာ မျှစ်ချဉ်ကိုဘာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ခြင်း၊ မျှစ်ဝါကကောင်းတယ် မျှစ်နီကကောင်းတယ် မျှစ်ချဉ်ကကောင်းတယ် ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းထက် ဂနေ့ ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ပစ္စုပန်အရေးမျှော်တွေးကာ လူကြီး – လူလတ် – လူငယ် မှသည် အနာဂါတ်ဆီသို့ ချီတက်ကြရာ/ကျရာဝယ် ……………………………………………………
Idealists ထက် Realists ကို ပိုမိုဦးစားပေး သင့်ကြောင်း … စသဖြင့် ဆောင်းပါးရှင်း ကိုLobby ရဲ့ ရွှေပြည်တော်ကြီးကို ဘဂျီးတို့မပါ မဆက်နိူင် ခေါင်းစဉ်ကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ် …. ချင် ….
ဟီဟိ… ပြန်ပြောရရင် ကျောက်စ်လည်း မျှစ်ချိုးစားဘူးတယ်၊
ယိုးဒယားမှာ သမိုင်းကြွေးဆပ်တုန်းကပေါ့၊ တောဝက်နဲ့ အပြိုင်ချိုးရတာဗျ၊
ကံကောင်းရင် တောဝက်သားဟင်း အဆစ်ရ၊ ကံမကောင်းရင် ပြေးရတာပေါ့၊
ကိုရင်ပြောသလိုပဲ၊ အနဲလေး ရေနဲ့တော့ အရင်ပြုတ်ရတာပဲ၊ ပြီးတော့မှသာ… ဂစ်
မျှစ်အရိုင်းက လှီးတဲ့ဓားမသန့်ရင်တောင်၊ တန်း မဲသွားတာ…
အွန်း ဟုတ်တယ်ဗျ …
ရှင်းရှင်းပြောရရင် မြန်မာ့ အစားအစာထဲမှာ မျှစ်က နည်းနည်း မာယာ များသလိုဘဲ …
မျှစ်နဲ့ လဖက် မကင်းနိူင်ဖွယ်
အူး၄နဲ့ သားသားက ဓါး မသန့်လို့ မဲတယ်ပေါ့ … အဲ့လို ဆိုချင်သလား …
ဝါးဘိုးမျှစ်တွေက ကြီးတော့ ပုဆိန်နဲ့ပေါက်ပြီးတူးခဲ့တာဗျ။
တနေ့က တွေ့ခဲ့တဲ့ မျှစ်ချဉ် ဖြူဖြူဂျီးက တွမ်တီးဝမ်းဂျီးထက် သာသဗျာ ဟိဟိ
ဝါးပိုးမျှစ်​မပါမြပြီး ချက်​ရတဲ့ ကရင်​တာလ​​ဘော့ ​လေးသတိယလာြပြီ
မနေ့ကပဲ ပဲခူးကပြန်လာတာ လမ်းမှာမျှစ်တွေ အတုံးလိုက်ရောင်းနေတာတွေ့ခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မ သိတာနဲ့မဝယ်ခဲ့ရဘူး။
မနေ့က ပဲခူးရောက်တော့ မျှစ်တွေ အတုံးလိုက်ရောင်းနေတာတွေ့ခဲ့တယ်။ ဝါးပိုးဝါးမျှစ်စို့တဲ့။ ဘယ်လိုလုပ် စားရမယ်မသိတာနဲ့ပဲမဝယ်ခဲ့ရဘူး။
ရေးပါဗျိုး မျှော်နေဘာမယ်။ မကြာမီထပ်သွားရအုံးမှာမို့ အမြန်သာတင်ဘာဒေါ့ဗျုးိ။
ကျွန်မပါတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ ဝါးပိုးမျှစ်စိမ်းတွေ ပေါပေါများများရှိတယ် ..
ဒီနေ့ ပုဇွန်နဲ့ ချက်တယ် .. အတုံးလိုက် ၁၅ မိနစ်လောက် ရေများများနဲ့ပြုတ်ပြီး ရေသွန်ပစ်ပြီး ခပ်ပါးပါးလှီးပြီး ပုဇွန်နဲ့ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့် ကြက်သွန်ဖြူနီဆီသတ်ပြီး ချက်တာ အရမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ် …
တခြား နည်းလမ်းကောင်းလေးများရှိရင် ပြောပြပါအုန်း ..
ကိတ်မုန့်ဖုတ်တဲ့အခါ အလယ်မှာ ဌာပနာလို့ရသေးဒယ် အန်တီဝေရဲ့…
ကရင်စည် ရေးတာ မြင်ပြီး
ခေါင်းထဲ မျှစ်ဟင်းတွေ တန်းစီပေါ်လာပြီ။
ဒါထက် ကလေး မွေးပြီးရင် မှို ၂ နှစ် မျှစ် ၃ လ ရှောင်ရတယ် ဆိုပဲ။
မြန်မာ အယူအဆ အရလည်း မျှစ်ကို အစာကြမ်းလို့ သတ်မှတ်ထားတယ် ဆိုလားးးး
မိုးကုတ်မှာက မျှစ်ခြောက်ကို ရောင်းတာ။ စားမယ်ဆိုမှ ရေစိမ်ပြီး ပြုတ်ပြီး သုပ်လိုသုပ်၊ ကြော်လိုကြော်။
အကြိုက်ဆုံးဟင်းထဲမှာ မျှစ်ဟင်းလည်း ပါသဗျာ။
ရှိတဲ့ စားတော်ပဲလေးနဲ့ မျှစ်လေးနဲ့ ကြော်စားအူးမှပဲ။
ကလေး မွေးပြီးရင် မှို ၂ နှစ် မျှစ် ၃ လ ရှောင်ရတယ် ဆိုပဲ နဲ့ ရှိတဲ့ စားတော်ပဲလေးနဲ့ မျှစ်လေးနဲ့ ကြော် စားအူးမှပဲ
မွသဲနော်။ မီးက ကလေးပဲ ရှိသေးတာ။ (ဗိုုက်ထဲမှာ) ငွိငွိငွိ
မြတ်စွာဘုရား ကယ်ပါ။ သခင်ယေရှု ကယ်ပါ။ အလာကယ်ပါ အပြန်ကယ်ပါ အသွားအပြန်ကယ်ပါ။
ဘယ်ခေတ်တုန်းကတည်း က အမျိုးလားလားမှ မတော်တဲ့ မှိုနဲ့ မျှစ်ကို မောင်နှမလုပ်ထားကြတာတုန်း။
သစ်တုံး ရေငွေ့ရိုက်.. သူ့ဟာသူ ပေါက်လာ စားကောင်းလား မစားကောင်းလား မသိ။ သများတို့ကတော့ ဒီတိုင်းပဲ
ချိုးရောင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မှိုသယ်တွေရယ်.. အရောင်ဆိုး ဆေးသိပ် ထားတဲ့ မျှစ်ရယ် စားမိရင်တော့မသိဘူး..
There isacommon misconception that mushrooms are notasafe food for pregnant women to eat. However, this could not be any further from the truth. There is no medical evidence which shows that mushrooms are not safe during pregnancy. While there are many women who simply do not like mushrooms because they are technicallyafungus, it is important to keep in mind that they can playakey role inahealthy diet during pregnancy. Here are some things to note about the health benefits of mushrooms and what to take into consideration if you eat them while pregnant.
Health Benefits of Mushrooms for Pregnant Women
There areafew health benefits of mushrooms that pregnant women should be aware. Mushrooms are known to beafairly good source of both zinc and iron. Anemia tends to be very common during pregnancy, so eating iron-rich foods is ideal. This vegetable also contains vitamin C, protein and dietary fiber. It is ideal to eat mushrooms in combination with other healthy vegetables, such as in the form ofastir-fry.
Choosing Healthy Mushrooms During Pregnancy
If you are planning to eat mushrooms during pregnancy, it is important to make wise choices. While there are plenty of healthy options to choose from, you should keepafew things in mind.
1. Fresh mushrooms are alwaysahealthier choice than canned mushrooms. Canned mushrooms tend to be high in sodium, while fresh mushrooms do not contain any preservatives. Most pregnant women will want to watch their sodium intake.
2. Avoid eating poisonous mushrooms. These mushrooms are dangerous to anyone who eats them. If you want to eat mushrooms, it is important to always purchase them atagrocery store or market. Never use mushrooms that you find in nature, even if it seems likeagood way to save money.
3. Stay away from mushrooms cooked in MSG. This is most common at Chinese restaurants. While some do not prepare their food with MSG, others do. It is ideal to request none when eating Chinese food during pregnancy.
Overall, it is important to keep in mind that mushrooms are safe during pregnancy. While some women may not like mushrooms or may not be able to stomach them while they are pregnant, they can play an essential role inahealthy diet. There is no reason to shun mushrooms from your diet during pregnancy, though it is ideal to opt for fresh instead of canned and to avoid the potentially poisonous mushrooms which are found in nature.
အနီဂိုဏ်း ဒါမှမဟုတ် ချစ်လှဇွာသော အမဲသား နှင့် မပတ်သတ်လို့ထင့် ..အမှားကြီးမှန်း သိလျက်နဲ့ ဘာမှဝင်မရေးတဲ့ သဂျိုင်ခီး ကို ကို အရမ်းချဉ်တယ် Shee ရယ်..
နာ လည်း ကြားဖူးတာ ဝင်ရေးတာပဲ။
ကလေးမွေးပြီး မှို ကို ၃ နှစ်မစားရဘူးးး
မျှစ်ကို ၃ လ မစားရဘူးလို့ ကြားဖူးတာ ပြောမိတာ။
မယုံရင် ရှီး ကျမှ အဝ ကျွေးပေါ့။
– Better blood pressure control
– Improve your blood cholesterol levels
– Promote your digestive health
– Anti-Oxidant and Anti-Inflammatory
– High supply of dietary fiber
– Possible cure for poisoning
– Uterotonic properties
– Wound cleaning
ဝါသနာပါရင် အပြည့်အစုံ အဲ့မှာ သွားဖတ်ကြည့်ပါ..
ကိုဝင်းကြည် ကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်လို့ ၅ချက်လောက် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်..
မှတ်ချက်။ ။အားပါးတရ မျှစ်ကို လော်ဘီလုပ်သည်။
(ဆေးဆိုး ဓါတ်စာ ထိထားတာများ မပါ)
နာ က လည်း မျှစ် မကောင်းဘူး ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူးးးးး
မျှစ် ကို ကြိုက်လွန်းလို့ မဖြတ်နိုင်လို့ ကလေး မမွေးဘူး ဆုံးဖြတ်ရမလား စဉ်းစားတုန်းးးးးး
သေဟဲ့ နိန္ဒိယ ..
ကိုယ်ဝန်ရကာစမှာ မျှစ်စားမိရင် abortion ရစေတယ်လို့ ပြောတာတွေရှိတယ်တဲ့ ..။
ဒါပေမယ့် သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေပြနိုင်တာ တခုမှ မတွေ့ရဘူးတဲ့ ..။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ အဓိက ဖြစ်တတ်တာ ၂ခုရှိတယ်။
တခုက သွေးအား နဲ့ သံဓါတ် အားနည်းတာ …။
အဲ့သည့်၂ခုလုံး အတွက် မျှစ်က ကောင်းတယ်ခည..။
နောက်ဆုံးတချက် ..မွေးကာနီးမှာ မျှစ်ကို စားသင့်သေးတယ်တဲ့ …
ဘယ်က နေဘယ်သူ ဘာလို့ ပြောခဲ့မှန်းမသိတဲ့ စကားလုံးတွေ
သားစဉ်မြေးဆက် သယ်ကြအူးမာလား ဟင်င်င်င်
စပျစ်သီး နဲ့ ဝိုင်
ဒညင်းသီး နဲ့ ဒညင်းဝက်
မျှစ်နှင့် မျှစ်ချဉ် တော့ အမျိုးတော်ပေမယ့် မတူဘူး ဆိုတာလေးတော့ ..သိထားပေးပါနော။
ဒင်းကို နိုင်အောင် ပြောဖို့အရေး လက်တွေ့စမ်းသပ်အူးမှပါ။
ရေနံချောင်းဘက် ရေနံမှော်ထဲနေတုန်းကတော့ တစ်တောင်လုံးဝါးတောဘဲမို့ မျှစ်ပေါချက်ကတော့ ပြောမနေချင်ဆုံးဘဲဗျာ။ အဲလိုပေါပေမယ့် ဒေသခံတွေဘဲ
စားကြတယ်။ နယ်စုံက လာတဲ့သူတွေကတော ဌက်ဖျားဖြစ်မှာကြောက်လို့တဲ့ မစားကြဘူးလေ။
တောထဲကမျှစ်စားရင် ဌက်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာ အယူအဆလွဲပါပြောလည်း အများကတော့
မျှစ် ဆိုတာ ဂလိုကိုး
( အဝါဆို ဝါးခယ်မက ပုစွန်ဥလေးနဲ့ကြော်)
ပုဇွန်ဥလည်း မစားရတာ ကြာပါပြီ၊
( ရွှေပြည်တော်ကြီးကို ဘဂျီးတို့မပါ မဆက်နိူင် ခေါင်းစဉ်ကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ် …. ချင် ….)
ကျေးဇူးပါ ကိုရဲစည်ရေ။ မျှစ်ချိုးပြီးတာနဲ့ အပေါ်ကအခွံတွေ ခွာဖို့ ပြုတ်ရတယ်လေ။ မဟုတ်ရင် ယားတာပေါ့။ အခွံခွာပြီးရုံနဲ့ မရသေးဘူး။ ထပ်ပြုတ်ရသေးတယ်။ ပျော့သွားမှ မျှစ်ကို အချောင်းလေးတွေဖြစ်အောင် ဇာဂနာနဲ့ ပေါက်ကြတယ်။ မျှစ်ကိုပြုတ်တာကြာရင် နီသွားတယ်။ ဖျော့ဖျော့လေးနီတာပါ။ ဆေးဆိုးသလို ရဲရဲကြီး မဟုတ်ဘူး။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဈေးကနေ ပေါက်ပြီးသားမျှစ်ဝယ်လာခဲ့ပြီဆိုရင် အိမ်မှာ ရေတစ်ထပ် ပြုတ်သင့်ပါတယ်။ ရေပွက်ပွက်ဆူအောင် ပြုတ်ပြီး ရေကိုသွန်ပစ်၊ ပြီးမှ ဆီသပ်ပြီးကြော်စားသင့်တယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ရေနဲ့ပြုတ်တာကို မျှစ်နူးအောင်လို့ သဘောထားပြီး တခါတည်း ပြုတ်ကြော်လုပ်ကြတယ်။ အဲဒီလို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ရေကို သွန်ပစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ မျှစ်မှာက ယူရစ်အက်စစ်များတယ်လို့ ဖတ်ထားဖူးတယ်။ အဲဒါက ကျောက်ကပ်အတွက် မကောင်းဘူး။ ဒါကြောင့် ဆိုးဆေး ပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ၊ ယူရစ်အက်စစ် နည်းသွားအောင် မျှစ်ကို မချက်ခင် ရေများများနဲ့ပြုတ်ပြီး ရေတွေ သွန်ပစ်သင့်တာပါ။
ပရောပဂန်းနား ဆိုတာ ဒီ ရွာ သူကြီး ကို တည့်တည့် ပြောလိုက်တာလား။
မျှစ် ဆိုတာကိုစားနေတဲ့အခါ ဝါး ဆိုတာကိုသိဘို့လည်းလိုပါလိမ့်မည်။
မျှစ် ကိုစားပြီး ဝါးမှန်းမသိရင်တော့ လေကကြီးပျက်ဘီပေါ့
ဒါ့ကြောင့် မျှစ်ကိုစားပြီးဝါးမှန်းသိဂျဘါ ( ကိန်ကိန် )
ပြောလို့သာပြောတာ မျှစ်ဆိုတာကို ဒီလောက်တောင်ရှင်းပြနေရတယ်ဆိုတော့
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တောသားဖြစ်လို့ရှက်ရမလိုလို ဒီလူတွေ ဝါးရုံအောက်ကထွက်လာတဲ့
မျှစ်ဆိုတာကိုမတွေ့ဘူး မသိဘူးလောက်အောင် မြို့ကြီးသားပီသနေတာလား
ဝါးရုံအောက်တွေမှာ အမှိုက်ထည့်တဲ့ ပလပ်စတစ်အိပ်အမဲတွေနဲ့ဖုံးထားတာ
ကျုပ်တို့ရွာမှာတော့ မျှစ်ပြုပ်တဲ့အခါ အရောင်လှအောင် ဆနွင်းမှုန့်ထည့်လေ့ရှိတယ်
မျှစ်အနီတွေရှိတယ်လို့တော့ပြောတာဘဲ တွေ့ဘူးသလိုလို မတွေ့ဘူးသလိုလိုဘဲ
ပြောခြင်တာက မျှစ်တစ်ချောင်းဟာ ဝါးတစ်ပင်ဘဲ
လက်ရှိကိုယ့်နိုင်ငံမှာက စားဝတ်နေရေးဆိုတဲ့ ကြပ်တည်းမှု့တွေအောက်မှာ
အဲ့သည်အထဲကမှ ဝါး ဆိုတာဟာကဏ္ဍတစ်ခုဘဲ
ဆိုခဲ့ပြီးသလို ပိုက်ဆံရဘို့ မိုးဦးမှာ မျှစ်တွေကိုချိုးကြတယ် နွေမှာ ဝါးတွေကိုခုတ်ကြတယ်
အရင်တုန်းကဆို တောင်တန်းကြီးလက်ညိုးထိုးပြီး ဒီတောင်ကြီးရှိသရွေ့ထမင်းမငတ်ဘူးကွလို့
မေမြို့ နဲ့ မန်းလေးကြားမှာရှိတဲ့ ရွာပါ။
မိုးဦးအချိန်မှာ ရောက်ဖြစ်တုန်းက ခင်မိနေတဲ့ ရွာသားတယောက်က ခင်လွန်းလို့
ဆိုပြီး မျှစ် သုံးလေးချောင်းလာပေးတယ်။ဒီအချိန် မှာမှရတဲ့မျှစ် ရှားတယ်။အရသာထူးတယ်။
ဆိုပြီးလာပေးတယ်။ကျုပ်က ဘယ်လိုစားရမှာလဲဆိုတော့ ဒီအတိုက်းချက်စားတဲ့။
မပြုတ်ရဘူးလားဆိုတော့ ။ပြုတ်ရင်အရသာပေါ့သွားမှာဆိုပြီး ကျုပ်ပဲချက်ပေးမယ်ဆိုပြီး
စားတဲ့အခါကြတော့ အားပါးပါး ကောင်းလိုက်တာ ။ ကြက်သားနဲ့မလဲဘူးပဲ။
နာမည်ပြောပေမဲ့မမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတယ်။ပုံစံက ဝိုင်းဝိုင်းပုပု လက်တဆစ်သာသာရယ်။
သပုန် ကနေ မျှစ်ဆြာဖစ်သွားပြန်လေပြီ
မှိုရောမျှစ်ရော.. ကလေးမမွေးခင်ရော.. မွေးပြီးရောစားကြ…
အနောက်နိုင်ငံတွေကောတ့.. မှိုအမျိုးစုံနေအောင်.. နေ့စဉ်စားကြပါတယ်..။
စားကောင်းတယ်ဆိုပြီး.. တပေါင်ဝယ်တယောက်ထဲဟင်းချက်စားလို့ကတော့.. သွားမှာပဲ.. မြန်မြန်..
စားချင်ရင်… ယိုးဒယားဆိုင်သွားပြီး.. သံဗူးအကြီးကြီးဝယ်ပါတယ်…
အဲဒါကို.. ရေစစ်.. အထုတ်ကလေးတွေပြန်ခွဲပြီး.. ရေခဲသေတ္တာအပေါ်ထပ်ထည့်ခဲထားပြီး.. စားပါကြောင်း..။
မှတ်ချက်။ ။ ဗမာစစ်သားဟောင်းကြီးပြောပြဖူးတာကတော့.. စစ်သားနဲ့မျှစ်က.. အထူးမိတ်ဆွေပါတဲ့…။
ဟုတ်မှာပါ..။ ဝါးပင်အောက်မျှစ်စားပြီးသေမယ်ဆိုလား.. သခင်သန်းထွန်းစကားတောင်ရှိသေး..
စကားအတင်းစပ်… မျှစ်နဲ့..မျှစ်ချဉ်.. လုံးဝ(လုံးဝ)မတူ…။
မြန်မာ့ဆေးပညာအမြင်အရတော့.. မှိုရောမျှစ်ရော.. တက်စာထင်တာပါပဲ..
ဝါးဆိုတာ တစ်ခါတုန်းက မျှစ်ပါဘဲ…။
နောက်တာ..ငယ်ငယ်က မျှစ်ချိုးဖူးတယ်။ ကိုရင်ရဲ ပြောသလို လက်ဆူးမှာဆိုးလို့ အခြားအပင်က အရွက်တွေခံပြီးတော့ကိုချိုးတယ်။ နောက်အိမ်ကိုပေးတယ်။ ချက်တာကတော့ ကျွန်တော့်အမေအပိုင်းဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲတော့မသိဘူး။ အများအားဖြင့်တော့ ပြုတ်ပြီးတော့ တို့တာများတယ်။.
ဒီလူဂျီး မျှစ်အကြောင်း ကောင်းကောင်းဂျီး သိလှပါလားဟ …
ရယ်လို့ …. အံ့ဩဘနန်း ဖြစ်သွားတဲ့ အခိုက်မှာ …
ဟိုစာပိုဒ်ကို ရောက်လာဒယ် …
အော် .. ကျံကျံနဲ့ ဖန်ဖန် …
မျှစ်ဒိုင်သမီးကို ဝင်လုံးရင်း (လုံးသည် ဆိုရာ၌ အထင်ကိုသာ ဆိုလိုသည်။ သိလိုဘာဂ ပို့စ်ရှင်ကို မေးဂျရန်။) မျှစ်အကြောင်း ကောင်းကောင်းဂျီး သိဂဲ့ဒါဂိုး … ဟူ၍ ပြုံးပြုံးကြီး ဖတ်မိတွားလေဒေါ့သတည်း ….။
သာဒု .. သာဒု .. သာဒု …